जनवाद र केन्द्रीयता बीचको द्वन्द्ववाद – www.janabato.com
जनवाद र केन्द्रीयता बीचको द्वन्द्ववाद
११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०५:१२ July 27, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
माक्र्सवाद धागो चुँडेको चङ्गा होइन, न त यो फाटेको छाता, जुत्ता वा टोपी नै हो ! न त यो बिटाद्वारा लच्किएको ब्रिफकेस नै हो ! यो त सामाजिक–धरामा गहिरो जरा गाडिएको विशाल वृक्ष हो । समाजको गतिशील विज्ञान हुनुको नाताले यसले मानवजीवनका हरेक तन्तुसम्म स्पर्श गरिरहेको हुन्छ । माक्र्सवाद विश्वको सबैभन्दा विकसित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दर्शन हो ।
-खेम थपलिया- कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ सबैभन्दा बढी उच्चारणमा आउने पदावली हो । वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक जीवनमा घगडान तथा अग्रज नेतृत्वले यसबारे स्कुलिङ पनि गर्दै आउनुभएको छ तर पनि यसको जीवन–व्यवहारमा सही किसिमले प्रयोग हुन सकेका छैन । कुरामा जनवाद तर काम–कारबाहीमा ‘अराजकता’, कुरामा केन्द्रीयता तर काम–कारबाहीमा ‘नोकरशाही’ को आरोप बेला–बेलामा लागिरहन्छ, किन ? के माओले नोकरशाहीका २० अभिव्यक्ति यसै संश्लेषण गर्नुभएको थियो ? माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेका पार्टी–संस्थालाई अनुशासित र सोद्देश्यमूलक बनाउने महत्वपूर्ण विधि भनेकै जनवादी केन्द्रीयता हो । जनवाद र केन्द्रीयताका बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । माक्र्सवाद धागो चुँडेको चङ्गा होइन, न त यो फाटेको छाता, जुत्ता वा टोपी नै हो ! न त यो बिटाद्वारा लच्किएको ब्रिफकेस नै हो ! यो त सामाजिक–धरामा गहिरो जरा गाडिएको विशाल वृक्ष हो । समाजको गतिशील विज्ञान हुनुको नाताले यसले मानवजीवनका हरेक तन्तुसम्म स्पर्श गरिरहेको हुन्छ । माक्र्सवाद विश्वको सबैभन्दा विकसित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दर्शन हो ।
जीवन–व्यवहारमा केन्द्रीयता र जनवाद कहिलेकाहीँ कसरी विपर्यासी भइदिन्छन् भन्ने दृष्टान्त हेरौँ – बुद्धकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालयका अङ्गुलीमाल (माणवक) जेहेन्दार विद्यार्थी थिए । जेहेन्दार विद्यार्थी भएकोले केहीले उनलाई मन पराउँदैनथे । ती मन नपराउने एकाध उद्दण्ड विद्यार्थीले माणवकका विरुद्ध कुलपतिसमक्ष षड्यन्त्रमूलक रूपमा झुट्टा आरोप लगाए । कुलपति रिसले आगो भइहाले । विश्वविद्यालयमा परीक्षा चलिरहेको उक्त समयमा कुलपतिले माणवकलाई गुरुदक्षिणाका रूपमा यस्तो आदेश दिए, “हजार मानिस आफैँले मारेको प्रमाण ल्याउनू ।” त्यसपछि माणवकले गुरुप्रतिको अन्धश्रद्धाको कारण हजार मान्छे मार्ने अभियान चलाए । आफूले मारेको प्रत्येक मानिसको एक–एक औंला गलामा भिरेको तारमा उन्दै गए । गुरुको ध्वंसात्मक आदेश अन्धभक्त भई उसले पालना गर्नुहुँदैनथ्यो । गुरुले पनि त्यसरी आदेश दिनुुहुँदैनथ्यो । यहाँ केन्द्रीयताका नाममा कुलपतिको नोकरशाही र जनवादका नाममा अङ्गुलीमालको अराजकता उत्कर्ष देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, हरेक घटना–परिघटनालाई द्वन्द्ववादी भएर बुझ्न किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बुद्ध र भिक्षुको प्रसङ्ग पनि हेरौँ । प्रवचन दिएपछि एक दिन एकान्तममा एक भिक्षुलाई बुद्धले सोधेछन्, “मैले आज बताएका कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्यो ?” भिक्षुले भनेछन्, “तपाईंका कुरा मलाई जम्मै राम्रो लाग्यो । त्यसमा केही बेठीक छ कि भनेर सोच्नुपर्ने विषय नै छैन ।” त्यसपछि बुद्धले भनेछन्, “उसो भए मेरा कुरालाई तिमीले गम्भीर रूपले तर्कशील भएर सुनेनौ । तिमीले मप्रति भक्तिाभाव राखेर मात्र प्रवचन सुन्यौ । कसैको कुरालाई भक्तिभाव राखेर सुनियो भने त्यसको राम्रो–नराम्रो पक्ष छुट्याउन सकिन्न । संसारमा कुनै पनि मानिसले सबै राम्रैराम्रो काम–कुरा गर्न सक्तैन । उसले गरेका काम र कुरामा केही नराम्रो पक्ष पनि हुन्छन् । तिमी राती एकछिन बसेर मेरा कुरालाई फेरि गम्भीर भएर सोच र तीमध्येबाट राम्रो पक्षलाई ग्रहण गर, नराम्रा पक्षलाई छोडिदेऊ ।”
‘केन्द्रीयता’ भन्नेवित्तिकै कार्यकर्ता आत्तिने र ‘जनवाद’ भन्नेवित्तिकै नेता आत्तिनै अर्थात् ‘जनवाद’ र ‘केन्द्रीयता’ लाई एक–अर्कोमा भयानक परस्पर विरोधी तत्वका रूपमा बुझ्ने प्रचलनका कारण सबैतिर ‘परिस्थिति’ चौपट्ट बनाउँदै लगेको यतिबेला ‘जनवाद’ भनेको ‘खोज’, ‘समाधान’, ‘अनुसन्धान’ वा ‘आविष्कार’ का रूपमा बुझ्नु तथा ‘केन्द्रीयता’ लाई सर्वोच्च ‘वैज्ञानिक संश्लेषण’ का रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सङ्गठनात्मक जीवनमा विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । जवस–मोर्चाका सम्मेलन, नेतृत्वको चयन, जिल्ला समितिका इन्चार्ज वा सेक्रेटरीको चयन, आर्थिक मामिला, सङ्घर्षका विविध कार्यक्रम वा समसामयिक सन्दर्भमा पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबारे जनस्तर–कार्यकर्ताबाट विभिन्न प्रश्न उठ्ने गर्दछन् । यथार्थतः पार्टीका हरेक मामिलालाई जनता आफ्नो पुँजी बनाउन चाहन्छन् तर हामीकहाँ त्यसको गलत अर्थ लगाउने गरिएको छ । जनता स्पष्ट हुन खोज्नु राम्रो कुरा हो तर त्यस्तो भइरहेको हुँदैन, किन ? यसको सिधा उत्तर हुन्छ कि त्यहाँ जनवादको व्यापक प्रयोग भएन । कहिलेकाहीँ केन्द्रीयता तथा जनवादको केमेस्ट्री निमिल्दा पनि यस्ता समस्या आउँछन् । यसको अर्थ जनवाद र केन्द्रीयताबीचको सम्बन्धलाई ओझेल पर्नु हो । विषय–घटनालाई द्वन्द्ववादी भएर नसोचिदिंदा–नबुझिदिंदा यस्ता समस्या आउने गर्दछन् । केहीछिन वा केही दिन वा महिना समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि त्यो निकै लामो समस्यसम्म बल्झिरहेको घाउजस्तो हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वले खुलेर सबै कुरा तल भन्ने सन्दर्भ मिलिरहेको हुँदैन, जनता–कार्यकर्ता तहबाट जमिनी रिपोर्ट नेतृत्वसमक्ष पु¥याउन पनि पाइरहेका हुँदैनन् । यस्तो बेला अनुमान वा विश्वासको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमान वा विश्वास माक्र्सवाद (द्वन्द्ववाद) होइन ।
-यो लेखको शीर्षक हामीले राखिदिएका हौं ।
← बुटवल बजारबाट गायक बसन्त लम्सालले गायिका अम्बिका केसीलाइ भगाए
त्रिशुली नदीमा बस खस्दा ७ जना यात्रुको मृत्यु →
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०६:२० जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on कैलालीमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको गाडीमा आगजनी
पार्टी एमालेमा विलयभएपछि माकेभित्र तीब्र असन्तुष्टि
८ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०६:०१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on पार्टी एमालेमा विलयभएपछि माकेभित्र तीब्र असन्तुष्टि
गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा फागुन १५ मा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक अनावरण हुने
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १३:२७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा फागुन १५ मा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक अनावरण हुने